विमान दुर्घटना ६ जनाको मृत्यु
Home/ समाचार/विमान दुर्घटना ६ जनाको मृत्यु
काठमाडाैँ, ४ बैशाख । चिलीमा विमान दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । चिलीको आर्किपेलागोस कम्पनीको बीएन–२बी–२७ सानो जहाज मंगलबार दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको हो ।जहाज उडेको केहि समयमा नै दुर्घटना भएको बताइएको छ । विमान घरमा खसेको र घरमा रहेकी एक महिला घाइते भएको बताइएको छ । विमान के कारणले दुर्घटना भयो भन्ने नखुलेको र विमानको ब्लाकबक्भेटिएकाले
(गोरखा), ४ वैशाख । ‘केही दिनअघिको घटना हो, राति साढे ९ जति बजेको थियो होला । बहिनी र म गफ गर्दै सुतिरहेका थियौं । एक्कासि कसैले ढोका ढक्ढक्यायो । हामी आत्तियौं । मैले डराई–डराई ‘को हो’ भनें । बाहिरबाट केटा मान्छेले ‘म हो, रक्सी खान आएको’ भन्यो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘हाम्रो त रक्सी बेच्ने घर होइन’, भनें । ‘माथिल्लो घरको दाइ हो क्या म, ढोका खोल्’ भन्यो । अनि मैले बिस्तारै ढोका खोलेर हेरेको मात्र थिएँ, क्य्राक गाउँको केटा रहेछ । घरभित्र छिर्‍यो र मेरी बहिनीलाई जबरजस्ती तानेर बाहिर लग्यो । बाहिर उसको गाउँका केटा टन्नै रहेछन् । त्यसपछि मैले आमा र भाइलाई बोलाएँ । हामीले यतातिर, उनीहरूले उतातिर, एकछिनसम्म बहिनीलाई तानातान भयो । भर्खरसम्म सँगै सुतिरहेकी बहिनीलाई उनीहरूले तानेर लगे । आमा र भाइ धेरै टाढासम्म पछिपछि गएर केके समझदारी गरेर बहिनीलाई छुटाएर ल्याए । अहिले बहिनी भागेर काठमाडौं गएकी छ । उतै काम खोज्दै होली ।’ह्यास ट्याग मीटु प्रयोग गर्ने दुनियाँलाई यो एकादेशको कथा जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यो राजधानीबाट १४२ किलोमिटर पर गोरखाका ५० देखि ५५ कोस टाढा रहेका हिमाली गाउँको ताजा घटना हो ।लामो समय लेबनान बसेर फर्केकी सोही ठाउँकी अर्की किशोरीलाई पनि केही समयअघि यसैगरी स्थानीय एक युवाले तानेर लगे । उनी उम्केर भाग्न सकिनन् । केही दिनसम्म घरभित्रै थुनिएर बस्नुपर्‍यो । अनि दाजुभाइको साझा दुलही भइन् । घरबाट भाग्ने मौका पाएपछि काठमाडौं गइन् । उतैबाट विदेश लागिन् ।
उनीहरूको मात्र पनि होइन, उत्तरी गोरखाका दुई दर्जन गाउँबस्तीका चेलीसँग यस्ता दर्दनाक कथाव्यथा छन् । चुमनुब्री गाउँपालिकाअन्तर्गत साबिकका बिही, प्रोक, ल्हो, सामागाउँ, सिर्दिबास क्षेत्रमा जबरजस्ती तानेर बिहे गर्ने परम्परा पुस्तौंदेखि कायम छ । चिनेको होस् वा नचिनेको होस्, मन परेको होस् वा नपरेको होस्, केटाले मन पराएपछि जबरजस्ती तानेर दुलही बनाउने चलन रहेको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष पेमाडुण्डुप लामा बताउँछन् । ‘यस्तो चलन बिहीमा अल्लि बढी छ । प्रोकमा पनि छ । अलिअलि त ल्हो, सामागाउँ र सिर्दिबासमा पनि छ’, उनले भने, ‘यो राम्रो चलन होइन, हटाउनुपर्छ ।’ यसबारे आफूले जनचेतना जगाउने उनको भनाइ छ ।युवाहरूले तानेर जबरजस्ती दुलही बनाउने (कु) प्रथाका कारण यस भेगका किशोरी असुरक्षित महसुस गर्छन् । मञ्जुरीबिना जबरजस्ती तानेर लाने र त्यसलाई ‘मौलिक परम्परा’ ठानेर नयाँ पुस्ताले पनि चुपचाप सहिदिँदा महिलाहरू आफ्नै घर, बाटो, पानीघट्ट, खेतबारीलगायत जहाँतहीं असुरक्षित रहेको शिक्षिका छिरिङ याङ्जोम बताउँछिन् । ‘घरमा बसिरहेको बेला होस् वा खेतबारीमा काममा जाँदा, पानीघट्टमा जाँदा, गुम्बामा जाँदा, मेलाजात्रातिर जाँदा जहाँबाट, जतिबेला पनि तान्न सक्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘देशको नियमकानुन पनि लाग्दैन । त्यसैले हाम्रो गाउँका छोरीचेलीलाई कहीं पनि सुरक्षा छैन
भगवानको कस्तो लेखान्त !! श्रीमान-श्रीमतीको कालगती मै एकैदिन मृत्यु…एउटै चितामा जले ! सबैले RIP लेखौ शेयर गरौ
यस्तो रोग जो कसैलाई पनि नलागोस्, उपचारमा सबै सम्पत्ति रित्तिए पनि रोग निको भएन
कतारी लाउरेहरु अब घर फर्केर आउदा पिन्सेन पनि मिल्ने भो , हेर्नुहोस खुसीको खबर अरुको लागि सक्दो सेयर गर्नुहोस
रातभरी आफन्तले मृत छोराको शव कुरेरै बसेः पाल्पामा हिजो भएको दुर्घटनामा विवेक र टंकले ज्यान गुमाए, आज बल्ल शव निकाल्ने तयारी